बोइलर कुखुराले दाना पाएन्न, फार्मले बेच्नेठाउ भेटेन्न, ग्राहक मासु किन्न भैतारिए - Sainokhabar
होमपेज / कृषि / बोइलर कुखुराले दाना पाएन्न, फार्मले बेच्नेठाउ भेटेन्न, ग्राहक मासु किन्न भैतारिए
बोइलर कुखुराले दाना पाएन्न, फार्मले बेच्नेठाउ भेटेन्न, ग्राहक मासु किन्न भैतारिए
साइनो समचारदाता पथरी/ लकडाउने गर्दा किसानले न दाना पाए न आफुसंग भएको कुखुरा बेच्न पाँए । फार्ममा कुखुरा दान खान नपाएर मर्न थाले बजार लाने अवस्था छैन ग्राहक माग गर्छन बेच्ने बातावरण छैन । बैंकबाट लोन लिएर पालेका कुखुरा २ देखि ४ केजि सम्मका छन । फार्ममा ७ सय बढि कुखुरा छन मारौँ कि पालौँ ? एक किषनको पिडा हो यो ।
उद्योग वाणिज्य संघलाई गुहार मागे अध्यक्षले भने लुकेर काटेर बेच्नु । बजारबाट बोइलरको माग आको आई छ । कोरोना भाइरसका कारण लागु गरिएको लकडाउनले मार्का परेको किसानहरुले बताए ।
मोरङ पथरी शनिश्चरे ५ का भिम प्रसाद गिरीले सधैं ३ हजार ३५ सय बोइलर कुखुरा पाल्ने गरेका छन । अन्य किसानमा भन्दा पनि यतिवेला बोइलर फार्म संचालकहरु बोइलर पाल्ने की मार्ने भन्ने अवस्थामा रहेको दुखेसो पोखीरहेका छन् । गिरीले फार्ममा २५ सय चल्ला लगाएका थिए ।
सामान्यतः ४० देखि ६० दिन भित्रमा कुखुरा बेचिसक्नुपर्ने गिरीको भनाइ छ । तर ६२ दिन वितिसक्दा पनि अझै ७ सय कुखुरा खोरमा नै छन् । जसो तसो १८ सय कुखुरा बेचेको भएपनि अझै ७ सय कुखुरा बाँकी रहँदा आफ्नो नाफाको त कुरै छाडौँ साउँ नै गुम्ने खतरा बढेको गिरीले सुनाउनुभयो । दैनिक २ बोरा (१ सय केजी) चारो खपत हुने गरेको छ । त्यो पनि ७ सय कुखुरालाई सास अढ्याउन मात्रै पुग्ने गिरीको भनाइ छ । बेचेर नाफा गोजीमा राख्ने बेलामा ६५ रुपैया केजीको चारो खुवाएर कुखुरा पाल्दा आर्थिक संङ्कट सुरुभएको गिरीको भनाई छ । अब तौल बढ्नुको सट्टा घट्न थाल्दछ । बजारमा २ सय रुपैया केजी बिक्ने कुखुरा थनक्याएर बस्नु परेको गिरीको दुखेसो छ ।
यस्तो संङ्कट यस अघि कहिले पनि भोग्नु नपरेको भिमका छोरा रमेश गिरीले बताए । बन्द भएता पनि चारो बन्द हुन्थ्यो त कहिले काँही समयमा कुखुरा बेच्न सकिन्न थ्यो तर अहिले न त चारो पाइन्छ न त बेच्न पाइन्छ । अब यो कुखुरा चारो खान नपाएर मरेभने कोरोना भन्दा खतरा दुर्गन्ध हुने डर गिरीले बताए ।
स्थानीय सरकारले खाद्यान्न र सागसब्जीलाई अत्यावश्यक भनेर प्राथमित्ता दिएको छ । २०६३ साल देखि निरन्तर बोइलर कुखुरा पाल्दै आएको रमेश गिरी माछामासु पनि उतिकै आवश्यक रहेको बताउछन । शरीरमा तागत र पोषणका लागि चाहिने मासुलाई बजार खुल्ला गर्नुको सट्टा बन्द गरेर कृषकलाई निरुसाहित गरेको गिरीको भनाई छ ।
गिरी परिवारले संचालन गरेको भोटेघुम्ती कृषि फर्ममा बोइलर मात्रै हैन बंगुर पनि रहेका छन् । बच्चा उत्पादनका लागि मात्रै पालिएका बंगुरबाट अहिले ५० वटा पठापाठी (भुनि, बुच्चा) रहेका छन् । ४० देखि ५० दिनको भएपछि बेच्नुपर्ने पाठा बेच्न नपाउदा दोहोरो घाटामा रहेको छोरा सुजन गिरीले बताए । ६ हजार रुपैया प्रतिगोटा बिक्ने पाठापाठीको माग बजार तिब्र रहेको तर ढुवानी गर्न नपाएको गिरीले बताए । पाठा बाहेक माउ, बिर गरेर अहिले ८५ वटा रहेका छन् । बंगुरमा मात्रै दैनिक २ बोरा (१ सय केजी) दाना सकिने गरेको छ । २ हजार ७ सय रुपैया प्रतिबोरा पर्ने दाना खुवाएर पाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको गिरीको भनाइ छ । त्यो पनि बजार बन्दले गर्दा समस्या रहेको उनको भनाई छ ।
गिरीको जस्तै समस्या छ वडा नं. ३ की पूर्णमाया पोख्रेल, छविलाल अधिकारी र चिरन्जीवि बञ्जराको । पोख्रेल संग ३ सय कुखुरा छन भने अधिकारी र बन्जरा संग ३ सय र ५ सय कुखुरा छन । अहिले सम्म एउटा पनि बेच्न नपाएको गुनासो पोख्रेलले गरेकी छन । बेच्ने बेला भएका छन् तर खै कसरी बेच्ने चारोको समस्या एकातिर छ अर्का्तिर कुखुरा बिक्दैन दोहोरो मारमा परेको अधिकारी बताउछन । समयमा बजार नपाउने हो भने बोइलर कुखुरा त्यसै मर्न थाल्ने हुन्छ । लाखौँ लगानी गरेका किसानलाई बोइलर व्यावसाय निल्नु न ओकल्नु भएको बोइलर ब्यावसायी बन्जराको पिडा छ ।
पथरी शनिश्चरे ५ का रमेश कार्कीको पनि उस्तै समस्या छ । १८ देखि २० लाख लगानी गरेर कार्कीको हसन्दह बजारमा जय किसन पोल्टि सप्लायर्स खोलेका छन । कार्कीको मातहतमा वडा नं. ५ र ६ मा गरेर २४, २५ जना किसानले ५ हजार हारहारी बोइलर कुखुरा पालेका छन् । २४ लाख ७० हजार मुल्य बराबरका कुखुरा रहेका छन् कार्कीको सप्लार्यसबाट चल्ला र दाना दिने र कुखुरा बेच्ने समयमा उठाउने गरेको कार्कीले बताए । किसानको ३० प्रतिसत र सप्लायर्सको ७० प्रतिसत लगानीमा कुखुरा पाल्ने भएकाले किसान र सप्लायर्स दुवैलाई समस्या परेको कार्कीले गुनासो छ ।
‘‘कुखुरा उठाउने वातावरण बनाइ दिन वडा अध्यक्ष र नगर प्रमुख दिलिप कुमार राईलाई कुरा राख्दा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्न भन्नुभयो । संघका अध्यक्ष दिपक बस्नेतलाई सम्पर्क गर्दा हसन्दहमा त्यति चेक हुँदैन त्यतै लुकेर काटेर घर घरमा डेलिभर गरेर बेच्नु भन्नुभयो । अब ५ हजार कुखुरा कहाँ लगेर काटेर बेच्नु ? कार्कीले पिडा सुनाए ।
बजारमा माछा मासुको अभाव, देश कोरोना संक्रमलले लकडाउन भएकाले नगरबासीले माछामासु खान नपाएको स्थानिय बताउछन ।